Ha’yada NCA oo Garoowe qoysas ugu qeybisay Deeq lacageed+Sawiro – SBC
Ha’yada NCA oo Garoowe qoysas ugu qeybisay Deeq lacageed+Sawiro
Posted by Webmaster on October 9, 2011 Comments
In kabadan afar boqol oo qoys kana soo barakcay koon furta somaliya iyo dad dan yar ah oo ku jira tobon kaam oo ku yaal Magaalda Garowe ayaa maanta deeq lacageed oo gaaryasa lixdan dolar qof kiba ugu deeqday Ha’yada NCA.
Boqolaalkaan qof oo isugu yimid Xarunta Dowlada Hoose oo lagu gudoonsiinayey deeqdaan lacagta ayaa waxaa hadalo ka soo jeediyay oo uga warbixiyay dadka waxaa la siinayo Masuuliyin ka kala socday Maamulka Degmada iyo Ha’yada NCA oo deeqdaan lacagta u qaybinasyay.
Gudoomiye ku xigeenka Degmada Garowe Maxamed Xamari oo ka hadlay goobta ayaa ku amanay ha’yada NCA u qaybinta lacagahan oo ay u bahan yihin dadka Barkacayasha ah oo uguna baqay in ay mujiyaan ha’yadaha kale ee Gobolka ka shaqeeya ku dasho caawin dad masaakina.
Madaxa Ha’yada NCA Yusuf C/qaadir Xaji Xirsi oo isna ka hadlay ayaa sheegay in uu barnamijkaani yahay mid ay ugu tala galeen dadka barkacayasha ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Magalada Garowe, oo uusan ahayd mid intaasi ku eg.
Dadka lacagta la siiyay oo sbc international la hadlay ayaa u sheegay dareenkooda ugana mahad celiyay cidii ka shaqaysay barnaamijkaani.